Ezona zixhobo ziLungileyo zokuThengisa nge-imeyile ngeWoocommerce | Martech Zone
NgoMvulo, Oktobha 26, 2020 NgoMvulo, nge-10 kaJanuwari, 2022 USheryl Jones
I-Woocommerce yeyona nto idume kakhulu kwaye ngokuqinisekileyo yenye yeeplagi zeCommerce eziphambili zeWordPress. Yiplagi yasimahla elula kwaye ethe ngqo ukuseta kunye nokusebenzisa. Ngaphandle kwamathandabuzo yeyona ndlela ilungileyo yokujika eyakho WordPress iwebhusayithi kwivenkile e-commerce esebenzayo ngokupheleleyo!
Nangona kunjalo, ukufumana nokugcina abathengi, udinga ngaphezulu kwevenkile eyomeleleyo yeCommerce. Ufuna eyomeleleyo iqhinga lokuthengisa nge-imeyile endaweni yokugcina abathengi kwaye ibajike babe ngabathengi abaphindayo. Kodwa yintoni kanye kanye intengiso ye-imeyile?
Ukuthengisa nge-imeyile kubhekisa kwisenzo sokufikelela kubathengi nge-imeyile. I-imeyile isenayo eyona ROI ilungileyo yalo naliphi na ijelo lokuthengisa. Inyaniso, Umbutho weNtengiso ngqo uxela ukuba ukuthengisa nge-imeyile i-ROI yi- $ 43 kuyo yonke idola echithwe, isenza esona sitishi sisebenzayo sokuthengisa ukuthengisa.
Ukuthengisa nge-imeyile kusetyenziswa i-ecommerce ukuya:
Cwaninga abathengi bakho
Khulisa abathengi abangakulungelanga ukuthenga okwangoku
Thengisa kubathengi abakulungeleyo ukuthenga.
Ukukhuthaza iimveliso zabanye abantu (umz.
Ukuqhuba ukugcwala kwiposti / kwibhlog entsha
Kutheni iWoocommerce iliQonga eliPhambili leCommerce:
I-Woocommerce inokusetyenziselwa ukuthengisa nantoni na
Iqonga elithembekileyo nelikhuselekileyo
Iindidi zeeplagi onokukhetha kuzo
Ngokukhawuleza kwaye kulula ukuseta
Ukukunceda wenze esona sicwangciso sentengiso se-imeyile, siza kwabelana ngezixhobo zokuthengisa ezi-5 eziphezulu; Kuya kufuneka wenze ukuba intengiso yakho ye-imeyile ihambe. Makhe siqale!
Izixhobo ezi-5 ezilungileyo zoThengiso lwe-imeyile ngeWoocommerce
Esi sisixhobo sokudibanisa indawo yakho kwiMailchimp, enye yezona nkonzo zaziwayo zentengiso ye-imeyile ezikhoyo. Esi sixhobo sikuvumela ukuba wakhe iifom, ujonge uhlalutyo, nokunye okuninzi. IMailchimp ibonelela abathengisi be-e-commerce izixhobo ezifunekayo ukunceda ukuqhuba ukuthengisa. Ikwavumela ukuba uvumelanise umthengi wakho kunye nedatha yoku-odola ukwenza imisebenzi kunye nokuthumela imikhankaso ekujoliswe kuyo. Elona candelo lililo? Ikhululekile ngokupheleleyo! Ezona mpawu:
Yenza iifom zokubhalisa ngokwesiko kwaye uzongeze kwindawo yakho yeWordPress
Hlanganisa kunye neendidi ezahlukeneyo zomakhi weefom kunye ne-e-commerce plugins
Jonga iingxelo ezineenkcukacha malunga namaphulo akho
Thumela izaziso ezizenzekelayo xa ababhalisi abatsha bebhalisa
I-Jilt liqonga lokuthengisa nge-imeyile lonke elakhelwe iimfuno zeevenkile zeWooCommerce. Ngoncedo lweli qonga, ungathumela iincwadi zeendaba, izibhengezo zentengiso, ii-imeyile zokulandela ngokuzenzekelayo, iirisithi, izaziso kunye nokunye! Ungagxila kukuzenzekelayo, ukwahlulahlulahlula, kunye nee-imeyile zentengiselwano, konke ngaphandle kokubingelela kumgangatho woyilo. Iimpawu eziphambili zibandakanya:
Thumela isibhengezo sentengiso
Yongeza ukuthengisa okunqamlezileyo kunye nokuthengisa phezulu kwii-imeyile.
Icandelo elisekwe kwintengo eyadlulayo kusetyenziswa isahlulo seinjini eziphambili
Ukufumana kwakhona ingeniso ngee-imeyile ezishiyiweyo zenqwelo.
Iinkcukacha zomsebenzi ezisebenzayo ze-imeyile nganye
Umyili we-imeyile omangalisayo, kunye neemodyuli zokurhuqa kunye nokuwisa
Qalisa ukulingwa kwakho
I-Follow-Ups sisixhobo esiza kukunceda ubandakanyeke ngcono kubathengi bakho ngokwenza iikhampasi ezintsonkothileyo ezisekwe kwimidla yomsebenzisi, kunye nembali yokuthenga yokuqhuba ukuthengisa kunye nokuzibandakanya okuphezulu, konke oku kunenzame encinci kwizitayile ezininzi zokuthengisa. Ezona mpawu ziquka:
Khulisa ukulandelwa kube ngamaphulo
Landela ixabiso lomthengi
Thumela ii-tweets kuwe ngethemba
Uhlalutyo olunenkcukacha- (vula / ucofe / uthumele / njl.
Yenza ulawule uluhlu lokuposa
Iitemplate zasimahla kunye nezesiko
Iikhuphoni ezenzelwe wena
Ukudityaniswa kohlalutyo lukaGoogle
Khuphela iPlagi yokuLandela
Moosend yenye yezona ndawo zinamandla zentengiso ye-imeyile kunye neqonga lentengiso elizenzekelayo eliya kukunceda ulungelelanise kwaye uzenzele amaphulo akho okuthengisa nge-imeyile yeCommerce. Uyilo lwayo olucacileyo kunye nejika elincinane lokufunda livumela abasebenzisi ukuba bafumane isiqalo, ngelixa umhleli we-imeyile yokutsalwa kunye noLahla kunye neetemplates ze-imeyile ezinokwenziwa ngokwezifiso zithembisa ukubiza kakhulu iinzame zakho.
Iimpawu eziphambili zezi:
Umhleli we-imeyile oqinileyo Tsala-uwise
Ilayibrari yetemplate ye-imeyile ebanzi
Ukwahlula kunye nokukhethwa kwe-laser-targeted personalization
Sele zenziwe, iiresiphi ezizenzekelayo ezizenzekelayo
Iphepha lokufika kunye neefom zobhaliso zibandakanya
Ukuhlaziywa kwexesha langempela
100+ udibaniso onokukhetha kulo
Fumana iMoosend Mahala
I-Omnisend sesona sixhobo silungileyo ekuyileni ii-imeyile ezenzekelayo kunye nezikhokelo ze-eCommerce. Ijolise ekuncedeni amashishini eCommerce enze ukuthengisa kwawo kufaneleke ngokuthumela imiyalezo ebhalwe igama lomntu olungileyo, ngexesha elifanelekileyo, esebenzisa ijelo elifanelekileyo. Umsebenzi wokutsala kunye nolahlo uvumelanisa iimveliso zakho kwaye ikuvumela ukuba ubeke ulwazi ngemveliso kwiileta zakho zamaphulo okuzenzekelayo. Iimpawu eziphambili zibandakanya:
Hlanganisa i-SMS, izaziso ze-web push, i-Facebook Messenger, kunye nezinye ezininzi kumxube wakho wokuthengisa
Thumela umyalezo olungileyo uye kumthengi olungileyo ngexesha elifanelekileyo, ngalo lonke ixesha usebenzisa i-automation.
Yenza amacandelo aguquguqukayo ngokusekwe kwiikhrayitheriya zakho
Ungavumelanisa abafowunelwa kwiziko ledatha lakho leWordPress.
Yenza amaphepha okufika kunye nokuvela ngokulula.
Ukulandela umkhondo wentsebenzo yentengiso ngeendlela ezahlukeneyo
Qalisa ukuLinga kwakho ukuLinga
I-Mailpoet sisixhobo esothusayo kakhulu esineenguqulelo zasimahla kunye nezeprimiyamu. Liqonga lokuthengisa nge-imeyile elikuvumela ukuba wenze yonke into ngokufanelekileyo kwideshibhodi yakho yeWordPress. I-MailPoet ibanga ukuba ithumele ii-imeyile ezintle ezifika kwiibhokisi zebhokisi engenayo ngalo lonke ixesha kunye nokwenza ababhalisile abathembekileyo. Iqonga lenzelwe abanini beendawo ezixakekileyo, ukubanceda ukuba baqale ngemizuzu. Iimpawu eziphambili zibandakanya:
I-MailPoet ine-plugin ye-WordPress ngqo.
Unokwenza ifom yobhaliso, kwaye uyishumeke naphina apho uthanda khona kwindawo yakho.
Yakha ii-imeyile nokuba zivela ekuqaleni okanye ngokusebenzisa iitemplate ezahlukeneyo
Cwangcisa uluhlu lwababhalisi abahlukeneyo, kwaye ulawule ngaphakathi kwiWindowsPress
Thumela izaziso zokubhalisa ngokuzenzekelayo kwaye wamkele ii-imeyile.
Ngezixhobo ezifanelekileyo zokuthengisa nge-imeyile kunye neeplagi, unokukwazi ukulawula ngokulula yonke imiba yentengiso ye-imeyile ukusuka kwifomu yobhaliso, ukudala i-imeyile, uluhlu lolawulo, ukulandelela umkhondo, nokunye okuninzi kwiwebhusayithi yakho yeWordPress. Ukudala nokulawula ii-imeyile ezizenzekelayo akukaze kube lula, enkosi kwezi zixhobo zikhankanywe ngasentla. Vavanya izixhobo, jonga amanqaku kunye nezicwangciso zamaxabiso ngaphambi kokukhetha isixhobo esifanelekileyo kuwe.
Kuyacetyiswa ukuba neqela leengcali zeWordPress ezivela kwiiarhente ezinokuthenjwa ezinje Ngaphezulu Ngubani onokuqonda ubunzima beshishini elikwi-Intanethi. Banokukunceda ukuba wakhe ivenkile yakho ye-eCommerce kunye nokunceda ukudibanisa zonke iiplagi eziyimfuneko zokuthengisa nge-imeyile.
Ukubhengezwa: Sisebenzisa amakhonkco onxibelelwano kweli nqaku.
tags: umbutho wentengiso ngokuthe ngqoeCommerceimeyile ye-ecommerceiqonga le ecommerceukuhlanganiswa kwe-imeyileemail Marketingimeyile roiUkulandelajilt imeyilemailchimpIposi yeposionke amagamawoocommerce
USheryl yiNgcali yeNtengiso ye-Sr e-Uplers enamava amakhulu ekuyileni uhambo oluchazwe kakuhle lomsebenzisi kwindawo yonke yentengiso yedijithali. Usebenzisa ubuchule bakhe bokuthengisa ngokwedijithali ukunceda amashishini azobe ii-ROI ezibalulekileyo.
Njani kwaye kutheni ubhalisela idilesi ye-imeyile yokuhambisa iAkhawunti kaGoogle